Filament Tape Factory - Mpanamboatra Tape Filament China, Mpamatsy
Ny kasety filamenta na ny strap tape dia kasety mora tohina entina ampiasaina amin'ny fonosana maromaro toy ny fanakatonana boaty fibre vita amin'ny fonosana, fonosana fanamafisana, entana amboara, fananganana pallet, sns. Misy adhesive mora tohina amin'ny tsindry mifono ao anaty fitaovana fanohanana izay mazàna sarimihetsika polypropylene na polyester ary fiberglassfilament natsofoka mba hanampiana tanjaka avo. Noforonin'i Cyrus W. Bemmels, mpahay siansa miasa ho an'i Johnson sy Johnson, tamin'ny 1946.
Misy karazany marobe amin'ny fantsona filamenta misy. Ny sasany dia manana tanjaka mahatratra 600 pounds isaky ny santimetatra ny sakany. Misy karazana sy naoty isan-karazany amin'ny adhesive koa azo alaina.
Matetika, ny kasety dia 12 mm (eo ho eo amin'ny 1/2 inch) ka hatramin'ny 24 mm (tokotokony ho 1 sentimetatra) ny sakany, fa ampiasaina amin'ny sakany hafa ihany koa.
Misy karazana tanjaka, kalifera ary famolavolana adhesive.
Ny kasety dia matetika ampiasaina ho fanidiana ny boaty mihombo toy ny boaty mifanindry feno, fampirimana dimy, boaty teleskaopy feno. Ny clip na kofehy miendrika "L" dia apetaka amin'ny takelaka mifanindry, manitatra 50 - 75 mm (2 - 3 santimetatra) amin'ireo takelaka boaty.
Ny enta-mavesatra na ny fananganana boaty malemy dia azo ampiana amin'ny alàlan'ny fampiharana tsipika na fatorana fantsona filamenta amin'ilay boaty.